आइतबार जन्मिएका मानिसको भाग्य कस्तो हुन्छ ? थाहा पाउनुहाेस् | Rochak
आइतबार जन्मिएका मानिसको भाग्य कस्तो हुन्छ ? थाहा पाउनुहाेस्
September 5, 2021 NepstokLeaveaComment on आइतबार जन्मिएका मानिसको भाग्य कस्तो हुन्छ ? थाहा पाउनुहाेस्
मानिसको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मवारले निर्धारण गर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ । हिन्दू धर्म अनुसार पनि मानिसको जन्म समय, तिथि, बार, स्थान अनुसार उसको ग्रह दशा, भविष्य र भाग्यको निर्धारण हुन्छ । मानिसको आचरण र भाग्य पनि कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा जन्मबार बाट थाहा पाउन सकिने कुरा ज्योतिष विज्ञानले मान्दछ । यसर्थ आईतवार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
आईतवार सूर्यको वार हो । जसरी सूर्यको प्रकाशबाट सबै ग्रहहरुले उर्जा लिईरहेका हुन्छन् । यहाँ सम्मकी मानिस,जीवजन्तु,वनस्पती पृथ्वी सबैले सूर्यबाट उर्जा लिईरहेका हुन्छन् । त्यसरी नै आईतवार जन्मने मानिसबाट अरु बार जम्मने मानिसहरुले केहि न केहि लिईरहेका वा आशा गरिरहेका हुन्छन् ।
ग्रहहरुको मन्त्रिमण्डलमा सूर्यलाई राजा मानिन्छ । त्यसैले आईतवार जन्मने मानिसहरु राज्यमा उच्च पोष्ट तथा कार्यकारी पदको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । आईतबार जन्मने मानिसको पितासँगको सम्बन्ध बलियो हुन्छ । रातो रङ,औषधि,उन, गहु,सेतो कागजको व्यापारबाट पनि मनग्गे लाभ लिईरहेका हुन्छन् ।
आइतवार जन्मेका व्यक्तिमा प्रशस्त उर्जा तथा कन्फिडेन्ट पावर प्रशस्त हुन्छ । सकारात्मक सोचकै कारणले जीवनमा प्रगतिपथमा लम्किरहेका हुन्छन् । अरुको भावना तथा संवेदनालाई सजिदै बुझ्ने हुँदा दयालु हुन्छन् तर कहिलेकाही कठोर निर्णय लिन पनि पछि पर्दैनन् । देखेको कुरा भनिहाल्ने र धेरै दिनसम्म मनमा कुरा खेलाएर बस्न नसक्ने स्वभाव हुन्छ । धर्म तथा अध्यात्ममा विशेष राख्ने हुनाले धार्मिक यात्रा गरिरहन्छन् ।
चिन्तन शक्ति निकै धेरै हुने भएका कारण लेखन,राजनीति अथवा वकालतको क्षेत्रमा लागेका हुन्छन् । अरु मानिसलाई सहयोग गर्न सधैँ तत्पर त हुन्छन् तर पनि उनीहरु चाँडै रिसाउने वा घमण्डी स्वभावका हुन्छन् । राजनीति,व्यापार व्यावसाय गरेर ईज्जत प्रतिष्ठा कमाउने तथा धनवान हुन्छन् ।
आइतवार जन्मेका व्यक्तिहरु धेरै जसो प्रेम विवाह गर्न रुचाउँछन् । आँटिला शाहसी तथा पराक्रमी भएका कारणले प्राविधिक पेशा व्यवासायमा अब्बल हुन्छन् । विशेष गरेर राजनीति,डाक्टर,पाईलट,विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा जबरजस्त पहुच स्थापित गर्दछन् ।
तपाईका दुई हत्केला जोड्दा आधा चन्द्रमा बन्छ कि बन्दैन? उसोभए तपाई भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि हुदैन हेर्नुहोस।
जग्गा बाँड्दै हिँड्थेँ, बाढीले आफैँ सुकुम्बासी बनेँ’ (भिडियोसहित)
June 17, 2021 Nepstok
यी साहसी नेपालीको सम्झनामा बेलायत सरकारले राख्यो रेल सेवाको नाम, को हुन् ती भाग्यमानी?